Wasiirka amniga, lacag muu ka qaatay Shabaab? - iftineducation.com
Wasiirka amniga, lacag muu ka qaatay Shabaab?
iftineducation.com – Farshaxaniiste Amin amir ayaa sawir xaqiiq ah ku cabiray dhibta uu Wasiirka amniga DFS ku hayo Amaanka iyo Horumarka Somalia.
Mas’uuliyiin iyo Siyaasiyiin kala duwan ayaa goor sii horeysay sheegay in xiriir qarsoodi ah uu ka dhexeeyo Wasiirka amniga Xukuumada Somalia C/risaaq Cumar, kaasi oo xiliyada qaar maleeshiyada Al-shabaab u fududeeya qabsashada goobaha qaar oo ay Kooxda wax kala soo dagaan.
Sawirkaani waxaa lagu xaqiijiyay Maleeshiyada Al-shabaab oo Boorso lacag ah gudoonsiisay Wasiirka Amniga si uu Ciidamada Dowlada uga saaro Gobolka Shabellaha Hoose, halkaasina ay Maleeshiyadu kala soo dagaan Hubka.
Heshiis khadka telefoonka ku dhexmaray Wasiirka iyo Hogaamiyaha maleeshiyada ayaa waxa uu Wasiir C/risaaq dalbaday in goorta ay Kooxdu lasoo dagaan Hubka ay si degdeg ah uga baxaan si aan loo fahmin.